जनताले कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्वीकार्दैनन्
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका आशन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक हुन केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण खाण । विपक्षीमाथि खरो टिप्पणी गर्ने खाणले अव कुनै शक्तिले रोक्न चाहेर पनि निर्वाचन रोक्न नसक्ने बताउँछन् । निरंकुश हुने भएकाले जतिसुकै कम्युनिष्ट विचारधारा राख्ने दल एक भएर कांग्रेस विरुद्ध निर्वाचन लडेपनि जित कांग्रेसकै हुने तर्क उनको छ । प्रस्तुत छ खाणसंग गरेको सारसंक्षेप :—
संविधान कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन्छ त ?
कांग्रेसका संस्थापक जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २००५ सालमा नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने संकल्प उद्घोष गर्नुभएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति नै राणाशासन अन्त्य र संविधानसभा निर्वाचनका लागि भएको थियो ।
तथापि, संविधानसभाको निर्वाचन हुन धेरै समय लाग्यो । संसारभर जनप्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक आधारशिलामा उभिएका संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति नै जीवन्त भएर अघि बढेको पाइन्छ । त्यही आधारशिलामै नेपालमा पनि संविधान निर्माण भयो ।
संविधानमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । कांग्रेसको अग्रसरतामा तीमध्ये एउटा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । कांग्रेसकै अगुवाइमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका अघि बढिसकेको अवस्था छ ।
कम्युनिष्ट र कांग्रेसमा फरक के छ र कांग्रेसलाई भोट दिन पर्ने ?
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहे त्यो माले होस्, चाहे त्यो माओवादी होस्, अथवा मसाल नै किन नहोस्, सबैले स्थापनाकालदेखि नै हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका हुन् । कम्युनिस्टको स्थापना, उत्पत्ति र क्रान्तिको उद्घोष नै हिंसा र हतियारबाट भएको इतिहास पढ्दा प्रस्ट हुन्छ ।
०४६ मा मालेलाई पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा कांग्रेसले कार्यगत एकताको आधारमा लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याएको हो । ०४७ को संविधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री, कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अगुवाइमा कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत दल मिलेर जारी गरिएको हो ।
त्यसपछि तत्कालीन माओवादीले हतियारको बलमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व ग¥यो । उसलाई पनि कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १२ बुँदे सहमति र बृहत् शान्तिसम्झौता गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिको बाटोमा ल्याउनुभयो । अहिले उनीहरु मुलधारको राजनीति गरिरहेका छन् । दुई दलले गठबन्धन गरेर कांग्रेस हराउन लागिरहेका छन् । तसर्थ, लोतन्त्रलाई सस्थागत र सुदृढ बनाउन कांग्रेसलाई जिताउनुको विकल्प नेपाली जनतासंग छैन् ।
कम्युनिष्टले गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो किन ?
त्यसवेला नेपाली जनता र कांग्रेस नेतालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत माक्र्सवादी९लेनिनवादी० ९जसले नाम माक्र्सवादी र लेनिनवादी राखे पनि बहुदलीय राजनीतिमा विश्वास गर्छ० सुध्रिनेमा शंका गरेका थिए । तर, कांग्रेसले उनीहरूलाई व्यवहारबाट सुधा¥यो ।
नेपालमा बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, प्राकृतिक सम्पदा, हावापानीको विविधता छ । यो विविधतामा राजनीतिक पार्टीहरू पनि विविध विचार र संस्कृतिका आधारमा उभिन्छन् । कुनै एकदलीय निरंकुशता नेपालमा सफल हुन सक्दैन भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको असफल प्रयासबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
तसर्थ कम्युनिस्टहरूले पनि यो विषय मनन गरेर संसारभर उदार राजनीति, उदार अर्थतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण भएको छ, त्यसलाई आत्मसात् गर्छन् । र, बिस्तारै माक्र्सवादको पुरानो संकल्प र आधारशिलालाई परिष्कृत गरेर बहुलवादी बहुदलीय लोकतन्त्रमा आउँछन् भन्ने कांग्रेसको विश्वास हो ।
कम्युनिस्टहरूले यति भाषिक अलमल र गोलमटोलका कुरा राख्छन् कि अहिले आएर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्छौं, संविधानको मूलभूत आधारशिला बदल्छौँ, व्यवस्थापिका९संसद् र संसदीय राजनीतिमाथि विश्वास गर्दैनौँ, एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नेपालमा स्थापित गर्छौं भन्ने जुन उद्घोष गरेका छन्, त्यो नेपाली समाज र नेपालीको लोकतन्त्रप्रतिको चाहनाविपरीतको उद्घोष हो ।
जसलाई जनताले कदापि स्विकार्दैनन् । त्यही उद्घोषका कारण चुनाव र सरकारमा उनीहरूले तालमेल गर्लान् भनेर कांग्रेस कत्ति पनि अत्तालिएको छैन । तर, उनीहरूले संसारबाटै ‘आउटडेटेड’ भइसकेको, तिरष्कृत भइसकेको, असान्दर्भिक भइसकेको कम्युनिस्ट शासनशैली नेपालमा ल्याउँछौँ भनेकाले कांग्रेसले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई संगठित गरेर, जनतालाई सूचित गरेर, निरंकुशताविरुद्ध उभिने शक्ति निर्माणका लागि ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ निर्माण गरेको हो ।
कम्युनिष्टहरु निरंकुश भएकाले जनताले स्वीकार्दैनन भन्ने यहाँको भनाई हो ?
नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म निरंकुशता स्विकारेका छैनन् । निरंकुशता स्विकारेको भए अहिलेसम्म राणाशासन नै कायम हुँदो हो । एकदलीय पञ्चायत, निर्दलीय शासन व्यवस्था र निरंकुश शासन व्यवस्था कायमै हुन्थ्यो होला ।
जबसम्म नेपालमा राजतन्त्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् ग¥यो, तबसम्म उसलाई जनताले पनि स्विकारे । जब राजाले मुलुकको संविधान कुल्चिएर, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहनामा आघात पु¥याएर जनताको शक्ति आफूले दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरे, त्यसपछि सबैको कल्पनाविपरीत नेपालबाट राजतन्त्र नै सखाप भयो ।
यतिसम्म कि माओवादीलाई पनि नेपालबाट राजतन्त्र सिद्धिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र ज्येष्ठ सदस्यका नाताले कांग्रेस सभासद् कुलबहादुर गुरुङले सभापतित्व गरेको संविधानसभा बैठकले करतलध्वनिबाट नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको हो ।
त्यसपछि बैठकबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पत्रकारले सोधे, ‘राजतन्त्र नेपालबाट अन्त्य हुनुको मूल कारण के हो रु’ उहाँले जवाफमा भन्नुभएको थियो, ‘खुदै राजा हुन्, राजदरबार हो, राजशक्ति हो । राजाको अज्ञानता, महत्वाकांक्षा र जनताप्रतिको तिरष्कार र लोकतन्त्रप्रति सद्भाव नभएका कारणले राजसंस्था सिद्धिएको हो ।’
त्यसो भए कम्युनिष्ट गठबन्धन र कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेपालमा लामो समय टिक्दैनन हो ?
अहिलेसम्म नेपालमा जसले लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धति र जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्विकारेन, त्यो शक्ति सिद्धिएर गएको छ । राणा, पञ्चायत र राजाहरू आफूहरू सिद्धिनेमा आफैँ विश्वस्त थिएनन् । माओवादी ०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा जसरी उर्लिएर ठूलो शक्ति बनेको थियो, त्यसैगरी सिद्धिन्छु भन्ने सोचेको थिएन ।
जितेर आएपछि आफूहरू जितुवा, अरू हरुवा भनेर निर्वाचन पद्धति र जनतमतको खिल्ली उडाए । हतियारको राजनीतिमा जाने कोसिसस्वरूप नेपाली सेनामाथि हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरे । जसकारण माओवादीको शक्ति खण्डित भएर ०७० सालको निर्वाचनमा पहिलोबाट घटुवा हुँदै तेस्रो शक्ति बन्न पुग्यो । जनताले अहिलेसम्मका निर्वाचनमा सदैव विवेक प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अहिले पनि लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्छन् । प्रजातन्त्रको पहरेदार, जनताको साथी भएकाले कांग्रेसलाई आलोचना गर्नु, समालोचना गर्नु र अझै राम्रो गर भनेर सुझाब दिनु स्वाभाविक हो । तथापि, मुलुकमा जब९जब संकट पर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रियताका लागि होस् या लोकतन्त्रका लागि होस, चाहे त्यो संसदीय व्यवस्थामाथि होस्, चाहे जनाधिकारमाथि होस् त्यसवेला कांग्रेसले सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई संगठित गरेर एक ठाँउमा उभ्याएको छ ।
हामी हिजो पञ्चायत र राजाविरुद्ध उभिएका थियौँ, आज निरंकुश कम्युनिस्ट शाशन व्यवस्थाको विरोधमा पनि उभिएका छौँ । निरंकुश कम्युनिस्ट विचार राख्ने पार्टी पनि नेपालमा लामो समयसम्म टिकिरहन सक्दैनन् भन्ने १० र २१ मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले छर्लंग पार्नेछ ।
के कारणले नेपालमा लोकतान्त्रिक दल अपरिहार्य छन् त ?
स्थानीय निर्वाचनमा पाएको मतलाई अंकगणितीय रूपमा जोडेर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले पाएको मतको अंकगणित जोडेर या २०७० को निर्वाचनमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले पाएको मत जोडेर जनताको मत जोडिँदैन । जनता जहिले पनि परिवर्तन र लोकतन्त्रका पक्षमा हुन्छन् ।
०६४ मा माओवादीलाई मत हालेकाजतिले ०७० मा पनि मत हालेका भए पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा पक्कै पनि झर्दैनथ्यो होला । ०५१ मा एमालेलाई मत हालेकाजतिले सबै निर्वाचनमा मत हालेको भए सधैँ एमाले पहिलो पार्टी नै हुन्थ्यो होला । ०४८ मा कांग्रेसलाई मत हालेकाजति सबैले सधैँका निर्वाचनमा मत हालेका भए सबै निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउँथ्यो होला । जनमत बदलिइरहन्छ ।
अहिले संविधानलाई परिष्कृत गर्ने, अझै जनताको स्वामित्वमा उभ्याउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर शान्ति र समृद्धि स्थापित गर्ने पक्षमा मतदाता हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
०३३ मा बिपीले भन्नुभएको थियो९राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवर्धनका लागि, नेपालका नागरिकले चाहेजस्तो विकास, युवालाई रोजगारी दिनका लागि एकता र मेलमिलाप चाहिन्छ । आज पनि मेलमिलाप र एकता आवश्यक छ । त्यो गर्न सक्ने कांग्रेसले मात्रै हो ।
कांग्रेसको मूल्य९मान्यता र सिद्धान्त विविध विचारलाई स्वीकार गर्ने र आफूसँग असहमत विचारलाई पनि स्वीकार गर्ने हो । सबै राजनीतिक दलको यथोचित सम्मान गर्ने हो । सबैको सहभागितामा मेलमिलापको आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउने हो । नेपालमा कुनै पनि ‘रेजिमेन्टेट’ शासन व्यवस्था आउन सक्दैन ।
प्राकृतिक सम्पदा, हावापानी, भूगोल, वनस्पति, जीवजन्तु, भाषा, संस्कृति, धर्म, जातजातिमा विविधता छ । यो विविधतामा अहिले नेपाली जनता हिजो राणा शासनकालमा खरिबोटको तल बसेर जम्मा हुने सेनाजस्तै होइनन् । जनता अहिले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धि चाहन्छन् ।
अवको आवस्यकता के हो त ?
अहिलेको आवश्यकता मधेस, हिमाल र पहाडलाई सम्मान गर्नु हो । समग्रमा सबै नेपालीले सबैको सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्दै नेपाललाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु हो । मुलुकलाई खण्डित हुन नदिनु अहिलेको राष्ट्रिय एकताको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
जसरी अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा डाँडामा उभिएर अर्को स्थानमा रहेका नेपालीलाई लाञ्छित गर्ने, होच्याउने काम गरिरहेका छन्, त्यसले नेपाललाई विखण्डनको दिशामा लैजान्छ । माक्र्सवादको अन्तिम लक्ष्य राज्यविहीन समाजको स्थापना गर्ने हो, वर्गविहीन समाजको स्थापना गर्ने हो, नेपालका कम्युनिस्टहरू अहिले त्यही दिशामा अघि बढिरहेका छन् ।
कुनै माक्र्सवादी र कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । तसर्थ अहिले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले जातीयता, साम्प्रदायिकता, भूगोल, रहनसहन र वेशभूषाका आधारमा उग्र र चर्को राष्ट्रवादले मुलुकलाई खण्डित र विभाजित गर्न लागिरहेका छन् । यसले राष्ट्रियतालाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । राष्ट्रियता बलियो बनाउन, लोकतन्त्रको संवर्धन गर्न, शान्ति स्थापना र समतामूलक समाज स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिको अपरिहार्यता छ । अभियान टाइम्सबाट ।